နှစ်ချို့ကော်ဖီ: August 2010
အတ္တတွေဖြိုဖျက်ထားတဲ့အဆောက်အဦးထဲမှာငါတို့ ဘ၀ကိုမျှဝေနေထိုင်ကြတယ်….။Moe Hlaing Nya
ပြတင်းပေါက်ဟာ အချိန်ရှိသမျှ ရှုခင်းထဲကိုတိုးဝင်လို့…
ပြတင်းပေါက်ဟာ အချိန်ရှိသမျှရှုခင်းထဲ ကိုတိုးဝင်နေမြင်းကွင်းက တစ်ဖက်လပ်နေတော့.. တစ်ဖက်လပ်မြင်ကွင်းလူအုပ်ထဲကို ချိုင်းထောက်တစ်ဖက်နဲ့ တိုးတိုးဝင်လာတဖြည်းဖြည်း ရောနှောသွားတော့ နောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူးနောက်ပြန်လှည့်လို့ဖို့မရေရာတော့ဘူး….တဖြည်းဖြည်း တရွေ့ရွေ့ဆက်တိုးနေရမြင်ကွင်းဟာ ပြတင်းပေါက်ထဲအလုအယက်တိုးဝင်မိုးကောင်းကင်တစ်ခုလုံးဟင်းလင်းပွင့်ထားတော့ကြယ်စုတွေဆီတိုးဝင်…ဆက်လက်တိုးတက်ဖို့ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များစာအုပ်ပုံကြားတိုးဝင်သွားလိုက်သူတစ်ကိုယ်လုံးပျောက်ဆုံးသွားပုံလူသတ်ပြီးရင်ထွက်ပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူးဗီဒီယိုဇာတ်ကားထဲက ဒိုင်ယာလော့က ထွက်ကျလာတယ်ဖန်သားပြင်ထဲတိုးဝင်လိုက် တဖျတ်ဖျတ်လှုပ်ခတ်ခရစ္စတိုဖာကိုလံဘတ်စ်ဟာ မြောက်အမေရိကကိုမတွေ့ရှိရင်ဘာကိုမှမတွေ့ရှိသူဖြစ်သွားမလား…ပင်လယ်ထဲကို ဆက်လက်တိုးဝင်မုန်တိုင်းထဲကိုဆက်လက်တိုးဝင်အဖေ့စာအုပ်စင်ပေါ်က အတွေးအမြင်စာစဉ်တွေ ခိုးဖတ်တုန်းကကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တယ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မပါဘူးဆက်လက်တိုးဝင် … လူကြားထဲကို ဆက်လက်တိုးဝင်ဘ၀ထဲကို ဆက်လက်တိုးဝင်အဆုံးအရှုံးတွေကြားမှာ ကျောက်ချမထားနဲ့ဆက်လက်တိုးဝင်သေခြင်းတရားက လမ်းဖယ်မပေးလည်း သံသရာထဲကို ဆက်လက်တိုးဝင်သွားလိုက်ပြတင်းပေါက်ကို ရှုခင်းမှာတပ်ရိုက်လိုက်ခန်းဆီးစတစ်ချို့ လေပြေတွေကို လှုပ်ခတ်လိုက်ပြတင်းမှန်ကနေ လေါ်ရာင်တွေ တိုးဝင်ရောက်လာ…ပန်းချီကားဟာ ဘယ်တော့မှဆွဲမပြီးတော့ဘူး.. အရောင်တွေကကင်းဗတ်စပေါ်တိုးဝင်လို့…။မိုးလှိုင်ည
မနက်ဖြန်… မနက်ဖြန် ကျွန်တော် အသက် ၂၈နှစ်ပြည့်မယ်… ဘာလိုလိုရယ်ပါ.. ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိတဲ့အချိန်တွေပေါ့ အမေကတော့ စိတ်ပျက်နေပြီ… အဖေကတော့ မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့မယ်.. သိပ်ဘာမှမပြောတော့ဘူး ဒီအသက်အရွယ်ဆိုတာ… အဲဒီစကားတွေလည်း အမေ့ဆီမှာ အဆုံးအစမရှိနဲ့… ကျွန်တော်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ… အရင်အတိုင်းပဲ ဘာမှသိပ်အပြောင်းအလဲမရှိသေးဘူး တခါတလေ ကဗျာရေးတယ်.. ဗိုက်ဆာတဲ့အခါ ကွန်ပြူတာပြင်စားတယ်.. တစ်ခါတစ်လေကျပ်တည်းရင် အဖေ့ဆီလက်ဖြန့်တောင်းတတ်တုန်း… ဘာလိုလိုနဲ့ သူတို့တွေလည်း ၂၂ နှစ်… ကိုစစ် ဟိုတစ်လောက နေမကောင်းဘူး.. သူက ကွန်ပြူတာရှေ့ပဲ ထိုင်နေရတော့.. မိုးလှိုင်ညရေ မင်းကဗျာအီးဘုတ်ခ်လေး ပေးပါ.. ဖတ်ချင်လို့ဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာကဗျာအီးဘုတ်ခ်မရှိဘူး.. အဲဒါနဲ့ မွေးနေ့မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကဗျာ လက်ရွေးစင်လေး ရှယ်ယာလုပ်ဖတ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ကိုသိုးထိန်းကို ဂျီကျရင်း အီးဘုတ်ခ်တစ်ခု အမြန်လုပ်လိုက်တယ် ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး.. ၂၈နှစ်တာ လူညံ့တစ်ယောက်ရဲ့ရာဇ၀င်လို့ ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်နာမည်ပေးလိုက်သေးတယ်… မွေးနေ့ကိုအစောကြီးကတည်းက လက်ဆောင်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ် သူတို့ကိုလည်း အမှတ်တရကျေးဇူးတင်တယ်… မနက်ဖြန်တွေ.. များများလာတယ် အမှတ်ရစရာတွေများများလာတယ် ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ ရာဇ၀င်ထဲမှာပဲ.. အဲဒီ့နေရက်တွေကလည်း ထားခဲ့လို့မရဘူး.. ရင်ထဲနက်နက်စူးစူး..မနက်ဖြန်ပေါ့.. ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး… ကဗျာတွေ အေးဆေးဖတ်နော် သူငယ်ချင်း.. ကျွန်တော်နဲ့နီးကပ်ရင်တော့ ကော်ဖီတိုက်ချင်ပါသေးတယ်…။ သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်… နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကဗျာတွေရေးဖြစ်နေမယ်.. ကျွန်တော်ညံ့ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေါ့ဗျာ… ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်ရောဂါနဲ့ကိုယ်မို့ပါ..။ မိုးလှိုင်ည Posted by
ညနေစောင်းရဲ့ နေဆည်းဆာနဲ့ အန္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒရာက ဖြတ်တိုက်လာတဲ့ လေးညှင်းလေးက. အရင်အချိန် ဖြတ်လျှောက်နေကျ.. ငမိုးရိပ်ချောင်းဘေး.. လေနုအေးအေးနဲ့ မင်းကို အလွမ်းပိုစေတယ်.. ရန်ကုန်.. ယာဉ်စီးသူ ရှားပါးပြီး.. အဲကွန်း အပြည့်တပ်ထားတဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေ စီးရင်း.. မထသ၅၂ နဲ့ ငါမမှတ်မိတော့တဲ့. အမြန်ယာဉ်တွေ ဖြတ်မောင်းနေကြ.. လမ်းမတွေနဲ့.. လူနံ၊ ချွေးနံ၊ ပေါင်းစုံကြား အော်ဆဲ ငေါက်ငန်းနေတဲ့ စပယ်ယာအကြောင်း သတိယရင်း မင်းကိုလွမ်းတယ် ရန်ကုန်.. ည အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ခလုပ်ဖွင့်တိုင်း လင်းတတ်တဲ့ ဒီမီးလုံးတွေကြားမှာ.. ဟိုနားတစ ဒီနားတစ ထိန်ထိန်လင်းနေတတ်တဲ့ မြို့တော်ရန်ကုန် ဆိုတာကြီးကို တသသနဲ့ လွမ်းတယ်..ရန်ကုန်.. စတားဘတ် ကော်ဖီဆိုင်က သင်းပျံ့တဲ့ ကော်ဖီကို သောက်နေရင်းနဲ့ ပန်းဆိုးတမ်းလမ်းဘေးက ခနော်ခနဲ့ ထိုင်ခုံများနဲ့.. တလိပ်တည်းသော လန်ဒန်လေးကို တူတူဖွာရှိုက် သူငယ်ချင်းများကို အမှတ်ယရင်း မင်းကိုလွမ်းတယ် ရန်ကုန်.. လမ်းမလယ်မှာ တယောက်တည်း လျှောက်သွားရင်းနဲ့.. ငြင်းခုန်ပျော်ပါး.. ရူးသွပ်ခဲ့တဲ့.. အင်းလျားပေါ်က အဖြစ်အပျက်တွေ စဉ်းစားမိရင်း မင်းကို အလွမ်းပိုစေတယ် ရန်ကုန်..ှဗိသုကာ လက်ရာမြောက်တဲ့ ခိုင်ခန့်ကြီးမား ဘုရားကျောင်းတွေကို မော့ကြည့်ရင်းနဲ့.. နှစ်ခြင်းခံခဲ့တဲ့.. တထီးတည်းပေမဲ့.. ကဗျာများစွာ.. စာများစွာ ဖွဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ ဂျပ်ဆင်ဘုရားကျောင်းကို ပြန်မြင်ယောင်ရင်း မင်းကိုလွမ်းတယ် ရန်ကုန်... ဖြစ်နိုင်ရင်လေ ငါ့လက်နှစ်ဖက်ကို တောင်ပံလိုဖြန့်.. အမြန်ဆုံးနုန်းနဲ့.. ငါအပြေးလာတွေ့ ချင်ပါတယ်.. ရန်ကုန်ရယ်.. လားရှိုးသူ..
တာရာမင်းဝေ မူရင်းလင့်ခ် Posted by
ခြေရာမဲ့တိမ်တွေလို လေနှင်ပြယ်လွင့်နေ သက်တံ့တစ်ခုလိုသိမ်းဆည်းလို့ မရတဲ့ အလှတရား ဘယ်နေရာမှာရှိနေနေ ဘယ်ကာလတရားမှာထားသွားသွား ဖျတ်ခနဲပေါ်လာတဲ့ စိတ်အာရုံမှာ ခဏလေးထိတွေရုံနဲ့… ဆွေး ရင်ထဲမှာ အင်္ဂတေအဟောင်းတွေကွာကျသလို…။ မိုးလှိုင်ည Posted by
ပြတင်းပေါက်ဟာ အချိန်ရှိသမျှ ရှုခင်းထဲကိုတိုးဝင်လို့...